Missing Pieces: ဖြစ်ချင်ဦးဟဲ့ အင်ဂျင်နီယာ . . . (၂)
အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံလေးတွေဆက်ပြောပါမယ်။
Foundation Year တက်ပြီးသွားတော့ ပထမနှစ်ကို စတက်ရပါတယ်။ ပထမနှစ်က Foundation နှစ်နဲ့ ပုံစံမတူပြန်ဘူး။ Foundation Year က တကယ် နာမည်နဲ့လိုက်အောင် Foundation ပဲသင်ပေးလိုက်တာပါ။ ပထမနှစ်စတက်တော့ စာတွေပိုခက်တာတွေ့ရပါတယ်။ သင်္ချာနဲ့ ရူပဗေဒ တွေပိုမြင့်လာပါတယ်။ ရူပဗေဒမှာ ရိုးရိုးမသင်ပဲ Calculus တွေနဲ့တွက်နည်းတွေပါလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Foundation အခြေခံရှိတော့ သိပ်ပြီးတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ တကယ်ပြဿနာတတ်တာ အီလက်ထရစ်ကယ် ဘာသာရပ်တွေပါ။
တစ်ခါမှ မသင်ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စသင်ရတဲ့အခါ လူက ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုမှတ်ရမယ် ကျက်ရမယ် တွက်ရမယ်ဆိုတာ သိကိုမသိလို့ပါ။ ပထမဆုံးပြဿနာက Computer Systems Engineering အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ လော့ဂျစ်ဂိတ်တွေ Flip Flop တွေပါ။ အဲဒီဘာသာရပ်ကို စသင်ရတော့ ဆယ်တန်းတုန်းက လော့ဂျစ်ဂိတ်သင်ဖူးတာကလွဲလို့ ဘာမှအခြေခံကို မရှိခဲ့ပါဘူး။ Karnaugh Map တို့ဘာတို့သင်တဲ့အခါ မနည်းလေ့ကျင့်ယူခဲ့ရပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အဆင့်ရောက်လာတော့ ပရောဂျက်ဆိုတာကြီးနဲ့ စရင်ဆိုင်ရတာပါပဲ။ ဒီဘာသာမှာလည်း ပရောဂျက် သုံးခုလို့ထင်ပါတယ်၊ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲတုန်းက ဆရာမ အမှတ်ပေးတာကို မကျေနပ်လို့ ဆရာမနဲ့စကားများရပါသေးတယ်။ အခြေခံမရှိတဲ့ ကျွန်တော် ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ထားတဲ့ ပရောဂျက်ကို အကောင်းဆုံး အတော်ဆုံးသူရဲ့ ပရောဂျက်နဲ့နှိုင်းပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းမပေးလို့ပါ။ အတော်ဆုံးသူကိုတော့ ဘယ်မှီမလဲ။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားသလောက်တော့ ရချင်မိတာ အမှန်ပဲ။ ပရောဂျက် သုံးခုကို ယောင်လည်လည်နဲ့ Google အားကိုးပြီး ရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှတော့ သိပ်ပြီးမတတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့တော့ အောင်ခဲ့ပါရဲ့။ ဖြစ်ချင်ဦးဟဲ့ အင်ဂျင်နီယာ လို့ပဲ ထပ်ညဉ်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု PSB ရဲ့ အားနည်းချက်က ဆရာတွေ အသင်အပြမကောင်းတာပါပဲ။ တချို့ဆရာတွေကတော့ တော်တော်လေးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သင်နိုင်ပေမယ့် တချို့ဆရာတွေကျတော့ အသင်အပြလုံးဝမကောင်းပါ။ ကွမ်တမ် ရူပဗေဒ နဲ့ Semiconductor တွေအကြောင်း သင်ခဲ့ရပေမယ့် နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာရဲ့အသင်အပြမကောင်းသလို စမ်းသပ်ခန်းမှာလည်း ပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့ မသင်ခဲ့ရပါဘူး။ နောင် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လို့ အဲဒီ အပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တော်ရင်လေးမိပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ ဆရာရဲ့ပညာပြမှုကို ခံရတာပါပဲ။ ဆားကစ်တွေအကြောင်းသင်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ သူစာသင်တာတော့ မဆိုးလှပါ။ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ အခန်းထဲက တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ မတည့်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် စာမေးပွဲတွေမှာ ပညာပြပြီး ခက်ခက်ခဲခဲပုစ္ဆာတွေမေးပြီး ပညာပြပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှတ်တွေကိုလည်း ကပ်စီးနဲပါတယ်။ Mid Semester ကို အောင်သူ ၃ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျတဲ့သူတွေက မညံပါ။ ကြိုးစားပြီးဖြေသော်လည်းကျကြပါသည်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီဘာသာကို မနဲမကျအောင်ဖြေဆိုခဲ့ရပါတယ်။ အောင်ခဲ့ပေမယ့် အမှတ်မကောင်းခဲ့ပါ။
တကယ်ကိုမလွယ်ပါ။ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်ကြာလာလေ ပိုပြီးတော့ ခက်ခက်လာလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာမေးပွဲတိုင်းကို အောင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့ဘာသာတွေလည်း ဆရာတွေ သင်တာကောင်းလို့ အမှတ်ကောင်းကောင်း ရခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ခင်ဦးဟဲ့ အင်ဂျင်နီယာလို့ထပ်ညဉ်းမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားရင်းနဲ့တော့ ဆက်ဖြစ်ချင်နေဆဲပါပဲ။
နောက်ပို့စ်မှာတော့ Programming ဘယ်လိုဒုက္ခစတွေ့လည်းဆိုတာပြောပြပါဦးမယ်။
Brought to you by နေတိုက်ရှိန်း at 3:39 AM
ravenclaw January 26, 2010 at 12:21 AM
ha ha....thanksalot for this opening :D...any how....this, too, will pass. :)